Ogaden News Agency (ONA) – Mudaharaad Balaadhan oo Kadhacay Magaalada Amara + Sababta.
Mudaharaad Balaadhan oo Kadhacay Magaalada Amara + Sababta.
Posted by Dulmane	/ August 30, 2018
Wararka naga soo gaadhaya Degmada Amara ee Gobolka Shucuubta Koonfureed ee Itoobiya ayaa sheegaya in uu halkaas kadhacay mudaharaad balaadhan oo lagaga soo horjeedo dagaalada qabiilka kusalaysan ee halkaas kasocda.
Sida aan lawada socono waxaa mudo 15 bilood ah Gobolka Shucuubta Koonfureed ee Itoobiya isku laynayay qoomiyadaha Guji iyo Kore oo kamid ah qoomiyadaha wada daga Gobolka, waxaana laxasuusan yahay dhibaatooyinka faraha bada ee kadhashay dagaaladaas.
Dagaalada udhaxeeya qoomiyadaha Guji iyo Kore oo kusalaysan dhul iyo deegaanaysay ayaa larumaysan yahay in ay ahaayeen kuwo gacan kusamays ah oo ay kadambaysay kooxdii TPLF oo iyadu kamushtari jirtay dagaalada qoomiyadaha iyo amaan xumada wadanka.
Dadka shalay isugu soobaxay magaalada Amara ayaa kudhawaaqayay dagaalada dooni mayno kuwa dagaalada huriyana dooni mayno taas oo umuuqata in ay qoomiyaduhu ogaadeen sababta dagaaladu udhamaan la’yihiin iyo cida dabada kariixaysa.
Dhinaca kale maamulka cusub ee uu hogaamiyo Abiye Axmed ayay dadku ugu baaqeen in ay wax kaqabtaan dagaalada soolaalaabtay ee udhaxeeya qoomiyadaha Gujiiyo Kore oo ay kubara kaceen 1.8 milyan oo shacab ah kumanaan kalana ay kudhinteen.
Dagaalada qoomiyadaha kusalaysan ayaa kasocda meelo badan oo wadanka ah waxayna kuwa ugu badan kasocdaan xuduuda Soomaalida iyo Oromada, halkaas oo dad badan oo shacab ah oo Soomaali ah lagu xasuuqay tan iyo intii uu xafiiska qabtay Raysal-wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiye Axmed.